I-Android trivia: Imibuzo eli-10 yokuvavanya ukuba uyazi njani iGoogle kunye nenkqubo yokusebenza yeselfowuni
Eyona Iindaba Kunye Nokuphononongwa I-trivia ye-Android: imibuzo eli-10 yokuvavanya ukuba uyazi njani iGoogle kunye nenkqubo yokusebenza yeselfowuni
Ngaba uyazi ukuba i-Android yeyona nkqubo isebenza kakhulu kwiselfowuni & apos; Kwaye isabelo sayo sentengiso siqhubeke sikhula, sifikelela kwi-astronomical ngaphezulu kwe-80% kwikota ezimbalwa ezidlulileyo, ishiya iApple inesabelo esincinci esimalunga ne-12% ye-smartphone iyonke kunye nawo onke amanye amaqonga okhuphiswano anjengefowuni yeWindows eneepesenti nje ezincinci. .
Abanye banokuthi ukuthandwa kwe-Android & apos kungenxa yokuba ivule kangakanani kwaye ikhetha kangakanani kubasebenzisi kuwo onke amaxabiso, kodwa ngabasebenzisi abaninzi phaya, usenokuzibuza: ngaba ndiyazi kakuhle i-Android? Inye indlela yokufumana impendulo: vavanya ulwazi lwakho ngefowuni yeArena Android!
Siqala kwakhona ngemibuzo eli-10 yobunzima obahlukeneyo: ezinye ziya kuba lula kubalandeli bexesha elide be-Android, ngelixa abanye banokukuqhubela ekubeni ukhangele iwebhusayithi yethu kunye noGoogle ukuze ufumane impendulo. Kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo besisomba amaqhekeza anomdla kunye neziqwenga zolwazi malunga nenkqubo yokusebenza kweGoogle, kwaye abafundi bethu abathembekileyo baya kuba nakho ukufumana impendulo kweminye imibuzo kwamanye amanqaku ethu akutshanje.
Ke ngoku ngaphandle kokuqhubeka, masihambe kunye nemibuzo (Ungazifumana iimpendulo nge-backstory encinci emva kombuzo ngamnye):
1. Phambi kokuba uthengise kuGoogle, umsunguli we-Android u-Andy Rubin wazama ukuthengisa inkqubo yokusebenza ku ...?
Ngaphambi kokuthengisa kuGoogle, umsunguli we-Android wazama ukuthengisa inkqubo yokusebenza:
Umva:Iqela le-Android, elinabantu abasibhozo ngelo xesha, liphume laya eSeoul, Korea, lifumene intlanganiso yokuqala kunye nomnye wabenzi beefowuni abakhulu ngelo xesha, iSamsung. Ukurhangqwa ngabaphathi be-Samsung abangama-20, uRubin uphakamisa umbono we-Android ngokungagungqiyo, kodwa endaweni yenkuthalo kunye nemibuzo, ekuphela kwempendulo ayifumanayo kukuthula cwaka. Emva koko, iqela labaphathi be-Samsung labaphathi abaphezulu bathetha into ebonakala icacile emva koko: “‘ Wena kunye nomkhosi uza kuhamba wenze le nto? Unabantu abathandathu. Ngaba uphakamile? ’Ngokusisiseko koko batshoyo. Bandihleka bephuma e boardroom. Oku kwenzeke kwiiveki ezimbini phambi kokuba uGoogle asifumane, ”ukhumbula njalo uRubin.
2. Uhlawule malini kuGoogle ukufumana i-Android?
Uhlawule malini kuGoogle ukufumana i-Android?
Impendulo echanekileyo:$ 50 yezigidi
Umva:Kwasekuqaleni kuka-2005, uLarry Page wayeza kuvuma ukudibana noAndy Rubin, kwaye emva kokuva ngomsebenzi wakhe kwi-Android, akancedi nje ukufumana imali eyindlala ye-Android OS yeprojekthi eyindlala- uthatha isigqibo sokuba uGoogle uza kufumana i-Android. Imvakalelo yokuba umzi mveliso oshukumayo kuye kwafuneka ukuba utshintshe sele icaphukisile abasunguli beGoogle, kwaye kwiMountain View uLarry Page kunye noSergey Brin bebefuna olo tshintsho okwethutyana, ingakumbi bexhalabile ukuba isenokuba yeyona nto inkulu iMicrosoft leyo ndizofika kuqala. Ngethamsanqa, uRubin wangena ngexesha elifanelekileyo. UGoogle wathenga i-Android malunga ne-50 yezigidi zeedola kunye nenkuthazo ngelo xesha, kwaye phakathi ku-2005 iqela le-Android elinabantu abasi-8 lahanjiswa kwi-Mountain View.
3. UAndy Rubin, utata we-Android, unomdla omkhulu kwindawo eyahlukileyo kuneenkqubo zokusebenza. Yeyiphi?
UAndy Rubin, umntu okhaba i-Android, unomdla kwindawo eyahlukileyo kuneenkqubo zokusebenza. Yeyiphi?
Umva:Ayisiyo mascots amancinci aluhlaza, khumbula wena, kodwa uhlobo lokugcina kunye nokugcina ixesha olukhulula abantu kumakhamandela okuphindaphinda okanye ukuhanjiswa kwempahla, kwaye iyakwazi ukwenza imisebenzi ye-no-brainer njengee-sensors eziqala iifilitha zomoya xa imvula igalela.
4. Inguqulelo yokuqala ehambelana ngokupheleleyo ne-64-bit ye-Android ngu ...?
Inguqulelo yokuqala ehambelana ngokupheleleyo ne-64-bit ye-Android?
Impendulo echanekileyo:I-Android 5.0 yeLollipop
Umva:Ukuze ube neqonga elipheleleyo le-64-bit, uGoogle kwafuneka azise ixesha elitsha lokubaleka. Oku kuyaziwa ngoku njenge-ART (i-Android Runtime), kwaye ngelixa ifumaneka njengokhetho kwi-Android 4.4 KitKat, ithatha indawo yomhla weDalvik ngokupheleleyo kwi-Android version 5.0 Lollipop.
5. Intengiso yokuqala yobunzima be-Android yayiyi ...?
Intengiso yokuqala ye-Android ye-smartphone yayi
Impendulo echanekileyo:T-Iselfowuni G1
Umva:UGoogle wayekhawuleze kakhulu ukubona isimemo esikhulu seApple kunye neapos; s Isibhengezo se-iPhone, kwaye kuthiwa siphose kumzamo omkhulu wokumilisela i-Android kwakamsinya emva kokukhutshwa kweApple & apos. UGoogle ukhethe i-T-Mobile njengomntu ophethe ukhetho kuye, kunye ne-HTC Iphupha, aka T-Mobile G1, yayisisiphatho sokuqala se-Android ukungena ebantwini nakwizandla.
6. Inkxaso yeekhibhodi zesiko ezinjengeSwiftKey yenziwe kwinguqulelo ye-Android ...?
Inkxaso yeekhibhodi zesiko ezinje ngeSwiftKey yenziwe kwinguqulelo ye-Android
Impendulo echanekileyo:Ikhekhe le-Android 1.5
Umva:UGoogle usungule ifowuni yokuqala ye-Android, i-HTC Iphupha, ngekhibhodi ebonakalayo, nesilayidi yeQWERTY, kwaye khange ixhase naziphi na iibhodi eziphambili ekuqaleni. Kungekudala, inkampani iloyisile uloyiko lokuba iibhodi ezitshixwayo azonelanga, kwaye yongeze eyayo ngenkxaso yezinye iibhodi zomntu wesithathu kwi-Android 1.5 Cupcake.
7. Esinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni izixhobo ze-Android zifuna imemori engaphezulu ye-RAM ...?
Esinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni izixhobo ze-Android zifuna imemori engaphezulu ye-RAM
Impendulo echanekileyo:IJava & apos; umqokeleli wenkunkuma
Umva:Kunye nokusetyenziswa kweJava kuza inkqubo ebizwa ngokuba yingqokelela yenkunkuma. Nje ukuba umsebenzisi we-Android avale usetyenziso, inkqubo yokuqokelela inkunkuma iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isebenze kwimemori. Ingxaki kukuba abaqokeleli benkunkuma bafuna imemori eyisebenzisayo kangangezihlandlo ezine ukuya kwezisibhozo ukwenzela ukuba umsebenzi wenziwe ngokukhawuleza. Ukuba inani elifunekayo lememori alifumaneki, izinto ziyacotha. Kuba i-iOS ayisebenzisi aba baqokeleli inkunkuma, iApple iyakwazi ukubaleka ngokubeka i-1GB ye-RAM kwi-iPhone, kwaye ifane okanye igqithe ukusebenza kweefowuni ze-Android.
8. Inkxaso yamaphephadonga aphilayo anikwe amandla kuhlobo lwe-Android ...?
Inkxaso yamaphephadonga aphilayo inikwe amandla kuhlobo lwe-Android
Impendulo echanekileyo:I-Android 2.1 Eclair
Umva:Enye yezona zinto ziphambili zikhutshiweyo ze-Android 2.1 yayikumaphephadonga aphilayo. Olu khetho lucocekileyo lwaluluphawu olubalaseleyo ngelo xesha, kodwa laziva luvavanyo kwaye uninzi lweqela lesithathu lokuqala lodonga oluphilayo lube nefuthe elibi ekusebenzeni kwezixhobo ze-hertz ezazincitshisiwe ngelo xesha. Okwangoku, yavela kakuhle, kwaye enyanisweni, amaphephadonga aphilayo, ihlala iyindlela yokwenza ngokwezifiso engaxhaswanga ngokupheleleyo ukuza kuthi ga kulo mhla ngayo nayiphi na enye inkqubo yokusebenza.
9. Ithebhulethi yokuqala ye-Android yayi ...?
Ithebhulethi yokuqala ye-Android yayi ...
Impendulo echanekileyo:I-Samsung Galaxy Tab
Umva:Emva kokukhutshwa kweApple kunye neapos; ye-iPad ekuqaleni kuka-2010, abenzi beefowuni abamkele i-Android bazifumana bengxamile: kuye kwafuneka bafumane impendulo. Ithebhulethi yokuqala ethengiswe kakhulu ye-Android, nangona kunjalo, yafika kuphela ngasekupheleni kuka-2010, kwaye yayingeyonto enkulu njenge-9.7-intshi ye-iPad. Yayi-Samsung Galaxy Tab, kwaye ibonakalisa ubungakanani bepokotho kunye nescreen se-7-intshi.
10. Uninzi luthi i-Android ine-true 'multitasking' ngokungafaniyo nezinye iiplatifti ezihambayo, kodwa yeyiphi inguqulelo ekwakuyimfuneko kuyo ukwenza imisebenzi emininzi?
Uninzi luthi i-Android ine-true 'multitasking' ngokungafaniyo nezinye iiplatifomu ezihambayo, kodwa yeyiphi inguqulelo ekwakuyimfuneko kuyo ukwenza imisebenzi emininzi?
Impendulo echanekileyo:Inkqubo ye-Android 1.0
Umva:Imultitasking yayakhelwe kanye ezingcanjini ze-Android, kwaye isebenze nakwezokuqala iinguqulelo ngaphambi kokukhutshwa koluntu, njengokukhutshwa kokuqala 'kweMilestone'. Nangona kunjalo, ukuba thina & apos; sijonga ukukhutshwa koluntu kuphela, i-Android 1.0 iya kuba yeyona ndawo apho inqaku lenze ukuba liqale kuluntu.
I-s21 Ultra vs 12 pro max
isamsung galaxy tab s marshmallow
Kutheni iifowuni zibiza kangaka
I-inshurensi ye-Asurion iya kufumaneka kwiVerizon iPhone 4
Ukulibazisa kulibazisa ukukhutshwa kweSwipe Night, amava adibeneyo e-adventure
Galaxy S10 + vs Pixel 3 vs iPhone XS: UKUQHELANISWA kwekhamera
IMotorola ithathe isigqibo sokukhupha i-Android Wear 2.0 yeMoto 360 yeMidlalo
IMicrosoft ekugqibeleni ikhupha usetyenziso lweOfisi emanyeneyo ye-iPad
I-Sprint ngoku ibonelela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-30